Home Wararka Mareykanka oo la baxay markab ka joogay biyaha Badda Soomaaliya
Mareykanka oo la baxay markab ka joogay biyaha Badda Soomaaliya
Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka ayaa amar ku bixisay in uu soo laabto markab nooca diyaaradaha qaada oo ka jooga nawaaxiga biyaha Soomaaliya, sidda ay ku warantay warbaainta maxalliga.
Markabkan oo lagu magacaabo USS Nimitz ayaa qorshuhu ahaa in uu tobbanka bilood ee soo aadan ka howlgala gobolka Bariga Dhexe si uu caawimaad hawada iyo mid dhanka howlgal ah uu u siiyo ciidamada Mareykanka.
Daabulitaanka Mareykanka ayaa qeyb ka ahayd in qorshaha Washington ay ciidamadda ka jooga Soomaaliya ugu wareejineyso Kenya iyo Jabuuti – kaasoo madaxweyne Donald Trump uu amray bishii December, 2020-ka.
Dib-u-celinta markabka ayaa timid markii ay soo baxeen cabsi ku aadan in Iiraan ay isku dayi karto weerar aargoosi ah oo la xiriira dilkii Qaasim Suleymaani – kaasoo todobaadkan ay kasoo wareegtay sanadkii koowaad.
Suleymaani ayaa ahaa taliyaha ciidamadda sirdoonka dibadda Iiraan, waxaana lagu dilay duqeyn uu amray Trump xilli uu kasoo degayey garoonka diyaardaha caasimadda Ciraaq ee Baqdaad bishii Janaayo ee sanadkii 2020.
Jeneraalkan wuxuu ahaa shaqsiga labaad ee ugu awooda badan Iiraan, waxaana geeridiisa ay dharbaaxo ku tahay qorshaha Iiraan ee Bariga Dhexe.
Iiraan ayaa sheegtay in ay qaadi doonto talaabo kasta oo ay ugu aargudayaan Suleymaani waana mid kamid ah sababaha markabka USS Nimitz uu si deg-deg ah uga baxay biyaha Baria Dhexe si gaar ah afaafka Soomaaliya.
Lama ogga hadii bixitaanka markabka ay dib-u-dhac ku keeni karta in askarta Ameerikaanka ay Soomaaliya ka hayaamaan horaanta bisha Janaayo ee 2021-ka ama in uu durba dhameystay dhamaan qorshihii loo keenay.
Warbixinadda qaar ee ay daabacayaan saxaafadda ayaa tilmaamaya in markabkan diyaaradaha qaada uu baaqi kusii ahaan doono biyaha Carbeed.
Ciidamadda Mareykanka ka jooga Soomaaliya ayaa tiradooda lagu qiyaasaa 700 illaa 500 boqol oo askart – kuwaasoo taageero dhanka tababarka, qalabka, waaya-aragnimada iyo howlgalada siiya dhigooda Soomaalida ah.